Vivo Energy-CUA: fisasan-tanana sy aron-tava ho an’ny taxi | NewsMada
Vivo Energy-CUA: fisasan-tanana sy aron-tava ho an’ny taxi
Natolotry ny orinasa Vivo Energy, mizara sy mivarotra ny vokatra Shell eto Madagasikara, omaly, ny arotava miisa 5 000 sy ny ranom-panafody fanasan-tanana (gel hydro-alcooliques) 500 litatra, hisorohana ny Covid-19. Nandray ireto fanomezana ireto ny ben’ny Tanàna, Andriantsitohaina Naina, natao ho an’ireo mpitatitra taxi eto Antananarivo.
Efa nizara aron-tava miisa 70 000 ho an’ny mpamily taxi-be sy ny mpanampiny, ny mpandeha, ny Vivo Energy. Natao izany nandritra ny fakan’izy ireo solika teny amin’ny tobin-dasantsy Shell, eny Itaosy, eny Ambohitrarahaba, eny Ivato, eny Iavoloha ary eny Anosizato, nanomboka ny 25 mey hatramin’ny 16 jona ho avy izao.
Nambaran’ny tale jeneralin’ny Vivo Energy, i Mondher Bouhouche, tamin’ny ben’ny Tanàna, Andriantsitohaina, fa vonona hatrany izy ireo hiara-kiasa amin’ny CUA eo amin’ny sehatra rehetra, toy ny fifamoivoizana, ny tontolo iainana, sns. Nilaza koa izy fa tsy maintsy atrehina ny krizy ary tsy maintsy arovana ireo mpiasa mivantana sy tsy mivantana, toy ireo tobin-dasantsy.